Chibereko Chisina Kurambidzwa auto maruva echikadzi | MyWeedSeeds.com
Chibereko chakarambidzwa auto maruva echikadzi
Chibereko chakarambidzwa auto maruva chakasimudza mbeu dzembanje, kune vatengi veFrance neveCanada "Le fruit defu" mbanje, vakagara nhaka hunhu hwavo kubva kune yakakurisa Blue berry mbanje indica. Mhedzisiro yeiyi huru Blue bheri kumashure ndeyekuti Chibereko chakarambidzwa chinogadzira chakasimba uye chiumbane mbanje chirimwa. Nekuda kweayo otomatiki maruva echisikigo, uyu mbanje chirimwa chiri chehurefu hushoma. Iyo auto inotumbuka chirimwa inotanga ichikura mushure memasvondo matatu. Zvisinei nemamiriro ezvinhu akareruka. Saka zita "auto maruva". Le chibereko defu mbanje inogadzira nzvimbo hombe yepakati cola [yepamusoro budhi] yakafukidzwa neTHC makristasi uye yakatakurwa neinonamira kwazvo resin iyo inogona kupa iyo mbanje buds bhuruu uye pingi kupenya Mashizha embanje akasanganiswa mimvuri yegirini iyo inowanzo kuve yakasviba munzvimbo dzinotonhora. , mbanje inodyara pachayo nezvose zviri mucolour inofadza ziso. Kune wepakati kureba mbanje chirimwa, chakarambidzwa michero mbanje mhodzi yemhando inoburitsa gohwo rakanaka. Chibereko chakarambidzwa mbanje chirimwa chakakodzera kukura mumba pamwe nekunze nekurima zvakanaka mugreenhouse. Tinokurudzira izvi zvikuru mbanje dzakasiyana kusvika kekutanga uye varimi vembanje vembanje. Asi Chibereko chakarambidzwa mhedzisiro inofanirwa kuve nayo kune iye connoisseur futi. Chibereko chakarambidzwa [Le fruit defu] chine hwema hwakawanda kwazvo hunozadza imba yekudyira kana gadheni munguva yekupedzisira yenhanho yemaruva. Hutsi hwakasimba asi ihwohwo chaihwo hwemuchero hwemafirosi hunosiya hunonaka hunonaka. Iyo yepamusoro ndeyeyese yakakomberedza indica muviri buzz ine zvishoma zvishoma kumusoro kwakanyanya.